Hemp Archives • Bogga 6 ee 6 • Dawooyinka Inc.eu
Jimco, May 20 | 2022
Bogga ugu weyn Tags Qoraalada lagu calaamadeeyay "hemp"
Hemp iyo haramaha waxaa badanaa loo arkaa inay isku badeecad yihiin. Si kastaba ha noqotee, farqi weyn ayaa u dhexeeya: Dhirta hemp waxay ka kooban yihiin ama yar yihiin THC ama dhirta cannabis waxay leeyihiin maadooyin THC sarreeya. THC waa sheyga hallucinogenic ee dhirta xashiishadda. Ubaxyada dhirta hemp waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo saliidda CBD. Iibka alaabadaani si aad ah ayey kor ugu kacday. CBD waxaa si balaadhan loogu isticmaalaa xanuun joojinta cudurada daba dheeraada iyo walwalka iyo walaaca.
cannabisSaamiyada & DhaqaalahaCBD
2 Sababaha muhiimka ah ee saamiyada Aurora Cannabis ayaa kor u qaadi kara sarreeya
albaabka daroogada April 23 2019
Saamiyada Cannabis Aurora (NYSE: ACB) ayaa qarxay 2019. Saamigu…
cannabiska dhimanWargeysyada caalamiga ah ee cannabis
420 ku faraxsan! Maxaad ka qabanaysaa maanta 16: Saacadaha 20?
albaabka daroogada April 20 2019
Haddii aad si joogto ah u isticmaasho xashiishadda, mararka qaarkood ama weligaa, fursadaha waa in…
cannabisSaamiyada & DhaqaalahaWararka
Warshadaha 7 ee hela cannabis caqabad
albaabka daroogada April 18 2019
Cannabis kuma koobna oo kaliya dawladaha sharciga ah. Xaqiiqdii, CBD hadda waxay ku dhowdahay…
CBDcannabisWararkaSharci dejinta & Sharci dejintaSaliida Cannabis
Kaabbaha fareebka ma aha mid caws
albaabka Ties Inc. January 28 2019
By Mr. Kaj Hollemans, KH Talo Sharci. Dhirta xashiishada waxa ku jira ilaa 70 cannabinoids oo kala duwan. The…
cannabisSaamiyada & DhaqaalahaWararkaWargeysyada caalamiga ah ee cannabis
BV Nederland waxay 'boqollaal milyan' ka kasbataa suuqa xashiishka ee soo kordhaya
albaabka daroogada January 18 2019
Warshadaha xashiishadda ee si degdeg ah u koraya waxay ka dhigan tahay diiwaanka lacagta Nederlaan. Daraasiin shirkado Nederland ah oo ka tirsan waaxda dhirta ayaa kasbada…
Saamiyada & DhaqaalahacannabisCBDWargeysyada caalamiga ah ee cannabisSharci dejinta & Sharci dejinta
albaabka Ties Inc. January 16 2019
Soo saaraha xashiishadda Canopy Growth ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday inay heshay shati…
Saamiyada & DhaqaalahacannabisWararkaWargeysyada caalamiga ah ee cannabis
albaabka Ties Inc. December 4 2018
2018 shaki la'aan wuxuu u ahaa sanad horumarsan warshadaha marijuana Iyada oo la sharciyeynayo marijuana gudaha…